2.9.2016 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသမီးတွေဟာများသောအားဖြင့်အသက် ၄၅ နှစ်မှ ၅၅ နှစ်အတွင်းသွေးဆုံးခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ အချို့သော အမျိုးသမီးများတွင် သွေးဆုံးချိန်...
1.9.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
တစ်ညတာအိပ်စက်ချိန်5နာရီ ဒါမှမဟုတ်5နာရီထက်နည်းပြီး အိပ်စက်သူတွေမှာ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးနိုင်ကြောင်းကို လေ့လာမှုအရသိရှိရပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ...
တရုတ်နံနံ၊ လေးညှင်း၊ ပင်စိမ်း၊ မြင်းခွာရွက်၊ ပဲပိုးတီ၊ ပက်ပါမင့်ဆီ၊ နွယ်ချို၊ ငရုပ်ပွအနီမှာပါရှိတဲ့ apigenin ဒြပ်ပေါင်းဟာ ဦးနှောက်ဆဲလ်ကြား...
လက်သည်းအတုတပ်ဆင်သူများ လက်သည်းပိုးမ၀င်စေရန် သတိထား
1.9.2016 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
တပ်ဆင်ထားတဲ့ လက်သည်းအတုဟာ ကျိုးပဲ့ထွက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ် ပင်ကိုလက်သည်းက ရှည်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ လက်သည်းအတုနဲ့ပင်ကို လက်သည်အကြားမှာလစ်ဟသွားပြီး...
လူကြီးပိုင်းတွင် ဘာကြောင့် သွေးတိုးရောဂါခံစားရတာလဲ
1.9.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ၏အဆိုအရ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ သွေးကြော ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် အသက် ၅၅ နှစ်နှင...
ပြင်းထန်သောမီးအပူချိန်က ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှာပါသော အာဟာရဓာတ်ကိုလျော့နည်းစေ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပေမယ့် ချက်ပြူတ်ပုံမမှန်လျှင် ထိုအာဟာရဓာတ်များကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
ကလေးနှင်းခူ (Baby Eczema)
31.8.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
1. ကလေးငယ်တွေမှာဘာကြောင့် နှင်းခူရောဂါဖြစ်ရသလဲ။
ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှ ceramides နည်းနည်းသာထုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ Ceramides...
Eating disorder (စားသောက်မှု ပုံစံမမှန်ခြင်း) ၏ မသိသာသောလက္ခဏာများ
စားသောက်မှု ပုံစံမမှန်ခြင်း (Eating Disorders) ဆိုသည်မှာ အစားအသောက် လုံးဝစားလိုစိတ်မရှိခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံစားပြီးရင်းထပ်စားခြင်း နှစ်မျိုး...